Steroid တစ်မျိုး Raws - AASraw modafinil အမှုန့်ကုန်ပစ္စည်းထောက်ပံ့
/ဘ‌‌လော့ခ်/"modafinil" အတွက် category မော်ကွန်းတိုက်
ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က ရေးသားခဲ့သည် modafinil .
ကြောင်း Modafinil ယူပြီးပြီးနောက်ကောင်းစွာ brainpowder အလုပ်တိုးမြှင်တကယ်လား? မျိုး modafinil ဖြစ်ပါတယ် 1.What aasraw ဘလော့ဂ်အညွှန်း? 2.How modafinil အလုပ်သနည်း modafinil သုံးရန် 3.How? 4.How ငါ modafinil (Provigil) ယူသင့်သလဲ modafinil ကုန်ကြမ်းအမှုန့် 5.It ၏ 6.The သက်ရောက်မှု 7.How အွန်လိုင်း modafinil ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ကိုဝယ်ခြင်းငှါ brainpowder တိုးမြှင်အတွက် modafinil အဘို့ကြီးသောပါသလဲ Modafinil [ ... ]
ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က ရေးသားခဲ့သည် modafinil နှင့်2မှတ်ချက် .
Modafinil ကဘာလဲ? Modafinil, အမှတ်တံဆိပ်အမည်: Provigil, Smart မူးယစ်ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူ့ [ ... ] narcolepsy ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အလွန်အကျွံအိပ် (အလွန်အကျွံနေ့ခင်းဘက်အိပ်ငိုက်ခြင်းဖြစ်စေသည်တဲ့အခွအေနေ) ဆက်ဆံပါသို့မဟုတ်အလုပ်အိပ်စက်ခြင်းရောဂါ (စီစဉ်ထားနှိုးနာရီနှင့်အခက်အခဲအိပ်ပျော်ကျသွားသို့မဟုတ်အလုပ်လုပ်သူတွေကိုအတွက်စီစဉ်ထားအိပ်ပျော်နေတဲ့နာရီအတွင်းအိပ်ပျော်တည်းခိုနေစဉ်အတွင်းအိပ် shift ဖို့အသုံးပြု, Modafinil ဝယ်ဖို့
Modafinil - မတ်မူးယစ်ဆေးဝါးများမှာ 1.What ဘလော့ဂ်အညွှန်း aasraw Nootropic အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်အတူထိပ်တန်းမတ်မူးယစ်ဆေး? Modafinil 2.What ပါသလဲ 3.How Modafinil အလုပ်လုပ်? 4.Modafinil အွန်လိုင်းစစ်မှန်သော Modafinil ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ကိုဝယ်ခြင်းငှါ vs. Modafinil vs. Armodafinil 5.Where 6.Modafinil ဘေးထွက်သက်ရောက်မှုနှင့်သောက်သုံးသော 7.Adrafinil အသုံးပြုခြင်းနှင့်ရောင်းချသူအကျိုးအမြတ်? Modafinil ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ကိုဗီဒီယို | ။ Modafinil ကုန်ကြမ်းအမှုန့် Nootropics အခြေခံဇာတ်ကောင်: အမည်: Modafinil CAS: [ ... ]
ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က ရေးသားခဲ့သည် modafinil နှင့်3မှတ်ချက် .
modafinil ကုန်ကြမ်းအမှုန့်မူးယစ်ဆေးဝါးအဘယျသို့သောပါသလဲ modafinil ကုန်ကြမ်းအမှုန့်နိုးနိုးကွားကွားအားပေးအားမြှောက်မယ့်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ modafinil ကုန်ကြမ်းအမှုန့်အိပ်ပျော်စဉ်အသက်ရှူကျပ်, narcolepsy, ဒါမှမဟုတ်ပြောင်းကုန်ပြီအလုပ်အိပ်စက်ခြင်းရောဂါကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အလွန်အကျွံအိပ်ကုသရန်အသုံးပြုသည်။ modafinil ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ကိုလည်းဒီဆေးဝါးလမ်းညွှန်ထဲမှာစာရင်းမရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ [ ... ]
ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က ရေးသားခဲ့သည် modafinil နှင့်7မှတ်ချက် .
Modafinil: အရည်အသွေးမြင့် Modafinil ကုန်ကြမ်းအမှုန့် Modafinil Modafinil ကိုဝယ်ခြင်းငှါအဘယ်မှာရှိရွှင်လန်းတိုးပွါးခြင်းနှင့်အိပ်ပျော်ခြင်းကာကွယ် narcoleptics များအတွက်ဆေးညွှန်းဆေးဝါးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာထိုနည်းတူသိမှတ်ခံစားမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်တိုးပွားစေဖို့ဖြစ်ပျက်နှင့် nootropics ၏အမျိုးအစားအတွက်အစွမ်းထက်နှင့်အလွန်အမင်းမှတ်ဖြည့်စွက်သည်။ သင့်ဦးနှောက်နှင့်စိတ်ဓါတ်များတိုးမြှင့်အတွက်ဘယ်လို modafinil အကျင့်ကိုကျင့်? [ ... ] အချို့သောမတ်မတူဘဲ